Xeer-illiye: ma cadda sida laga yeelo qofka lagu qabto muqalisnimo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xeer-illiye: ma cadda sida laga yeelo qofka lagu qabto muqalisnimo
Rasmussen: waxay u badanyahiin dad caawinayey qaxootiga
La daabacay torsdag 21 april 2016 kl 10.07
Tirada lagu soo ogoo dacwad ah muqalisnimo in ay dad waddanka ku soo geliyeen ayaa kor u kacday dhayrtii lasoo dhaafay.
60 qof ayaa lagu soo oogay dacad noocaas dhamaadkii sannadkii hore, iyadoo 29 kale dacwad lagu soo oogay bishii marsa sannadkan. Dhamaan kiisaskan dacwadaha ah waxay ka dhaceen gobolka Skåne oo boondada Öresundsbron qaxooti badan sannadkii hore ka soo tillaabeen- intaan xaduudaha kontorool lagu soo rogin. Marka loo barbardhigo sannadkii 2014kii tiro iskugeyn ah 17 qof ayaa dacad muqalisnimo lagu soo oogay.
Balse waayadan denbe kiisaskan maqalisnimo dembiilayasha waxay u badan yahiiin dad qaxootiga si bini’aadnimo ah ugu caawinaya in ay xaduuda ka tillaabiyaan, kuwaas oo aan wax lacag ah ka qaadan.
– Sannadyadii hore qofka dembiiyada lagu qabto waxuu badana ahaa ruux lacag ku qaadanayey muqalisnimada. Balse maanta waxaan aragnaa kiisas muqalisnimo oo nooc kale ah, ayey tiri Linda Rasmussen oo xeer illaaliye ka ah magaalada Malmö qaabilsana kiisaska muqalisnimada.
– Waxay ahaan kartaa ruuxa dembiga loo heysto in uu caawineyey oo qoyskiisa ama eheladiisa xaduuda ka soo gudbinayey, ama waxay ahaan kartaa ruux si bini’aadnimo ah qaxootiga u caawinaya. Dabcan meesha kamo maqna muqalasiin lacag doon oo isku daya in ay ka faa’ideystaan qaxooti, ayey Linda Rasmussen.
Hey’adda xeel-illaalinta Sweden Åklagarmyndigheten ayaa hadda dooneysa in sharciga lagu qeexo sida laga yeelayo dadka lagu qabto iyagoo si bini’aadnimo ah u gacan siinaya qaxootiga oo waddanka soo gelinaya. Caadiyan qofka lagu qabto dembi muqalisnimo cinqaabtiisa waa saddex bilood oo xabsi ah.
Dhabo tus horey EU uga soo baxay ayaa u ogalaanaya in cinqaabta laga daayo kiisaska noocaan ah qaarkood ee ku salaysan bini’aadnimo. Laakiin ayaa hirgelin sharci cinqaab ka deyn noocaan ah, inkasta oo maxkamada sare ay albaabbka u fursatay suurtagalnimada sharci noocaan ah. Laakiin si ay u hirgasho waxaa loo baahanyahay in uu soo baxo dhabo raac cusub.